Rabic al-thani - Wikipedia
Rabī’ al-Thānī (, loogu dhawaaqoRabīʿ al-Ṯānī, IPA: [raˈbiːʕ æθˈθæːniː]) waa bisha afaraad ee Kalandarka Hijriga. Bisha Rabiical thani waxaa sidoo kale loo yaqaana Rabī` al-Ākhir (ربيع الآخر, taasi oo logu dhawaaqo Rabīʿ al-ʾĀḫir/rabīʻ al-āḵir, IPA: [raˈbiːʕ ˈʔæːxɪr]).  Bishani waxay ku dhamaataa 30 maalmood.
Bisha Rabiical thani waa bisha afaraad ee maalintiriska Hijriga ah.
Ereyga Rabiic waa erey Af Carabi ah, kaasi oo macnahiisu yahay "Dayr", halka ereyga thani ay tahay "labo" ama "labaad"; taasi oo "Rabi' al-thani" macnaheedu yahay "Dayrta labaad". Bishani sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Rabī` al-Ākhir (ربيع الآخر, taasi oo logu dhawaaqo Rabīʿ al-ʾĀḫir/rabīʻ al-āḵir, IPA: [raˈbiːʕ ˈʔæːxɪr]).
Wakhtiyada bilaabmeyso bisha Rabiical thani ee sanadaha 2010 ilaa 2016
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabic_al-thani&oldid=214923"